November 2016 – Mecca Al -Mukarama Foundation
TIRO BEELKA JAAMACADAHA GUDAHA TURAANTURRO MISE TALLAAB HORE LOO QAADAY?
Nidaamka waxbarasho ee dalka waxa uu soo maray heerar kala duwan oo mid waliba uu lahaa duruuftiisa gaarka ah ayna jireen ammaan iyo dhaliilba.Qoramadeenna waxaan ku ifinay naa waxbarashada sare ee jaamacadeed xilli dalku burbur ku jiray ayna maqnayd kaalintii hay’adihii dawladeed ee ku hawlanaa dejinta siyaasadda waxbarasho iyo kormeerkeeda dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka. [...]
Waxbarashada Soomaaliya waxay soo martay heerar kala duwan. Waxaan qormadaan ku soo bandhigi doonnaa marxaladihii kala duwanaa ee waxabarashada dalku soo martay, iyadoo aan u kala qaadi doonno xilliyo kala duwan kuwaas oo kala ah: 1-Marxaladdii Isticmaarka ka hor. 2-Marxaladii Isticmaarka. 3-Xukuumadihii Rayidka. 4-Xukuumaddii Kacaanka. 5- Marxaladda Burburka. 1- WAXBARASHADA SOOMAALIYA ISTICMAARKA KA HOR. Tacliinta [...]
SAWIRRO: Tartan isboorti oo lagu maamuusayey maalinta macallinka Soomaaliyeed oo dhexmaray barayaasha dugsiyada Jaabir Bin Xayaan iyo Macallin Jaamac
Tartan isbooti oo lagu maamuusayey munaasabadda 21-ka Nofeembar ee maalinta Macallinka Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Tartanka oo ay isaga horyimaadeen labo koox oo macallimiin ah, islamarkaana ka kala socday dugsiyada Macallin Jaamac iyo Jaabir Bin Xayaan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan. Natiijada tartanka ayaa noqotay in macallimiinta dugsiga Jaabir Bin Xayaan aya [...]
SAWIRRO: Doorashada guddoomiyaha ardayda dugsiga Jaabir Bin Xayaan (Faraca Afarta Jardiino) oo lagu qabtay xarunta dugsiga
(Wargeyska DUGSI): Waxaa maalintii khamiista oo ku beegnayd 17/11/2016 lagu qabtay xarunta dugsiga Jaabir Bin Xayaan (Faraca Jardiinka) doorashada guddoomiyaha Midowga Ardayda iyo guddoonnada guddiyada kale ee dugsiga. Xilka guddoomiyaha Midowga Ardayda waxaa ku tartamayey shan murashax oo kala ah: Max’ed Baashi Aadan Cali C/kariin Max’ed C/naasir X.Iidow Abuukar Max’ed Khaliif Axmed Yuusuf Xasan Max’ed [...]
Dugsiga Macallin Jaamac oo kaalinta koowaad ka galay tartan suugaaneed loo qabtay qaar ka mid dugsiyada gobolka Banaadir
(Wargeyska DUGSI): Tartan suugaaneed ay ka qayb galeen arday ka kala socotay qaar ka mid ah dugsiyada gobolka banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, tartanka waxaa soo abaabulay hay’adda CISP oo hawlaha ay qabato waxbarashadu ka mid tahay, ardaydii ka socotay dugsiga Maccallin Jaamac ayaa ku guuleystay kaalinta koowaad ka dib markii ay soo bandhigeen [...]
SAWIRRO: Dugsiga Jaabir Bin Xayaan (Faraca Juungal) oo laba laabay adeeggiisa waxbarasho
(Wargeysja DUGSI): Dugsigaan oo ah mid dhawaan laga furay xaafadda Juungal ee degmada Yaaqshiid waxaa si xawli ah uga socda hawlihii tacliin-tarbiyadeed ee loo aasaasay iyadoo ay ku soo hiranayaan arday fara badan oo ku nool deegaanka dugsiga laga hirgeliyey, waxaa uu dugsigu dhawaan degay dhisme weyn oo qaadi kara arday fara badan ka dib markii [...]
Saamaxaaddu Waa Sifo Wanaagsan
(Wargeyska DUGSI): Saamaxaadda ama cafinta waxey ka mid tahay sifooyinka aadka u wanwanaagsan ee Alle (Subxaanahu Wataacaalaa) iyo Rasuulkiisa Muxamed ah (Sallallahu Caleyhi Wasallama) ay fareen dadka Muslimiinta ah oo dhan. Waa Maxaay Saamaxaad? Saamaxaad ama cafin waa: In qofku iska cafisyo ama saamaxo qalad ay ka galeen dad kale, isagoo awooda inuu ka aarguto. [...]
MACALLINKEEN ALLOW KAAL (MUNAASABADDA 21KA NOFEEMBAR 2016)
(Wargeyska DUGSI): Oraahda “Macallinkeen Allow Kaal” waxaa ay tilmaamaysaa macno mug weyn leh, waxa ay cabbiraysaa dareenka jacayl ee loo hayo macallinka Soomaaliyeed iyada oo ay bulshadu qirsan tahay kaalinta baraha ee dhinacyada barbaarinta iyo bariddaba. Macallinka Soomaaliyeed waa midka soo saara raasumaalka dhabta ah ee dalka, kaas oo ah kobcinta garaadka da’yarta iyo horumarinta [...]
ANSHAXA GUUD IYO MIDKA GAARKA AH EE LAGA RABO ARDAYGA
(Wargeyska DUGSI): Waxbarashadu waxey lama huraan u tahay dhammaan aadanaha, sidaas oo ay tahay waxaa lgama maarmaan ah in waxbarashada ay ku lifaaqantahay aadaab iyo anshax suuban. Ardayga ama qof kasta ee wax baranaya waa inuu noqdaa mid anshax wanaagsan, haddii kale aqoonta uu bartay ayaa micno beeleysa. Haddaba waxaa jira aadaab iyo anshax laga [...]
Doorashada guddoomiyaha guddiga Ardayda ee Dugsiga Macallin Jaamac oo la qabtay
(Wargeyska DUGSI): Waxaa dhawaan lagu qabtay xarunta dugsiga Macallin Jaamac doorashada guddoonka guddiga ardayda ee sanad dugsiyeedka 2016/2017, hawsha dooorashada oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimaya waxaa ku guuleystay Mudane Xasan Xaaji Axmed oo noqonaya guddoomiyaha guddiga ardayda dugsiga Macallin Jaamac. Dugsiyada Mu’asasada Maka Al- Mukarama ayaa lagu yaqaan in si [...]